Onye na-egwu egwuregwu na Lawn Ga-atụ Egwu Ọkụ na Ndị Aghọ Aghọ - RH
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Onye na-egwu egwu na Lawn Ga-atụ Egwu Hel Na-esi Aghọ Aghọ Aghọ
Onye na-egwu egwu na Lawn Ga-atụ Egwu Hel Na-esi Aghọ Aghọ Aghọ
by admin September 9, 2015 589 echiche
Na 'Ọnwụ nke Ezinụlọ,' The Joker na-eme otu n'ime ihe nzuzu kachasị njọ ọ rụtụrụla. Ọ dị ka onye nyere mmadụ iwu ibepụ ihu ya. O wee jiri obi ọjọọ nwaa ịrapara ya azụ. Ọ bụ ihe na-adịghị mma, nri? M na-ekwu ma ọ dịkarịa ala obere obere?
Well ThinkGeek enyela ndị Fans The Joker onyinye ga-anọgide na-enye. Ezigbo onye Joker gosipụtara mgbe ọhụụ ya si 'Ọnwụ nke Ezinụlọ.'
Nke a 36 x 24 x 10 nke anụ ọhịa na-eguzogide ihe ịchọ mma na-adịghị mma, ga-emenye ụjọ na hel site na ndị aghụghọ, ọbụlagodi na Gotham. Ọ na-egosipụta The Joker clawing nke ahịhịa ahịhịa ndụ zuru ezu na anụ ọhịa anya na rictus ọchị. Ọ bụ naanị $ 89 ma enwere ike zụta ya EBE A.